China Soft PVC Wristband & Bracelets orinasa sy mpanamboatra | SJJ
Malefaka PVC Wristband dia mety amin'ny olon-dehibe na ankizy amin'ny karazana fotoana rehetra. Ny fehin-tànana malefaka PVC dia vita amin'ny fitaovana PVC malefaka miaraka amin'ny bobongolo maty. Malemy, malefaka, mateza ary tontolo iainana ny fitaovana. Ny haben'ny mahazatra dia 220 mm ho an'ny olon-dehibe na 190 mm ho an'ny ankizy, raha ny habe namboarina dia ...
Malefaka PVC Wristband dia mety amin'ny olon-dehibe na ankizy amin'ny karazana fotoana rehetra. Ny fehin-tànana malefaka PVC dia vita amin'ny fitaovana PVC malefaka miaraka amin'ny bobongolo maty. Malemy, malefaka, mateza ary tontolo iainana ny fitaovana. Ny habe mahazatra dia 220 mm ho an'ny olon-dehibe na 190 mm ho an'ny ankizy, raha misy habe namboarina kosa dia misy amin'ny famoahana bobongolo vaovao amin'ny vola kely. Ny karazan-karazan'akanjo malefaka amin'ny PVC Wristband toy ny fehin-tànana, fehin-tànana, fatorana adaladala, fehikibo tànana, famantaranandro ary asa hafa misy haingo isan-karazany dia malaza manerantany. Ireo logo natokana ho azy dia namboarina, namboarina, feno loko, vita pirinty na voasokitra tamin'ny laser. Ny vokatra 2D sy 3D misy faritra maro loko dia tsara hanehoana ny naotin'ny logo anao, ary hahatonga ny endrikao ho velona sy mazava kokoa. Tsy misy MOQ voafetra, fotoana famokarana fohy, fiarovana avo lenta ary serivisy tsara no tombony hanampiana anao bebe kokoa. Ny fehin-tànana malefaka sy fehin-tànana PVC malefaka miaraka amina logo natokana ho anao sy ny loko isan-karazany dia hihaona amin'ny fangatahanao amin'ny mpivarotra fehin-tànana lehibe na fehin-tanana ary brasele.
Antony: Die Struck 2D na 3D
Colors: loko miloko afaka mifanitsy amin'ny loko PMS
Famaranana: ny logo dia azo atao pirinty, ambongadiny, alefa tsy misy loko, alefa miaraka amin'ny loko feno, sokitra tamin'ny laser ary tsy misy
Safidy fametahana mahazatra: TSY misy miraikitra amin'ny lamosina na vy amin'ny tadin'ny tehamaina
MOQ: Tsy misy MOQ voafetra, betsaka kokoa, vidiny tsara kokoa
Teo aloha: Sarin'ny sary malefaka PVC
Manaraka: Winders Cable Cable Winders
Fehikibo fehikibo miaramila
Sarontava natory namboarina
Vola Mamiratra Liquid
Kitapo keychain an'ny kitapom-bola Silicone